यसकारण चाहिन्छ ‘स्वास्थ्य संकटकाल’ – Health Post Nepal
यसकारण चाहिन्छ ‘स्वास्थ्य संकटकाल’
२०७८ वैशाख २१ गते ६:५३
दोस्रो लहरमा कोरोना संक्रमण निकै तीव्र हुन थालेपछि फेरि देशमा ‘स्वास्थ्य संकटकाल’ लगाउनुपर्ने माग उठेको छ।
देशमा भयावह स्थिति आएमा त्यसको नियन्त्रणका लागि राज्यका सबै ध्यान र लगानी त्यसमै केन्द्रित गर्नका आपतकाल वा संकटकाल घोषणा गरिन्छ।
यद्यपि ‘वुहान इपिसेन्टर’को सुरुवातमै अर्थात् अघिल्लो वर्ष नै देशमा स्वास्थ्य संकटकालको बहस चलेको थियो।
त्यो बेला पनि स्वास्थ्ष तथा जनसंख्या मन्त्रालय सरकारलाई यसबारे राय सुझाव र प्रस्तावसमेत गरेको थियो।
र, यसपालि पनि त्यसको बारेमा फेरि बहस उठ्न थालेको छ।
सामाजिक सन्जालमा त नागरिकले तत्काल स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न र सेना परिचालन गर्नसमेत माग गरिरहेका छन्।
मन्त्रालय के गरिरहेछ?
मन्त्रालयको एक अधिकारीका अनुसार स्वास्थ्य संकटकालका विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल चलिरहेको छ।
‘अस्पतालमा बेड खाली छैनन्। स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित छन्। स्वास्थ्य प्रणाली तहसनहस भएको छ,’ उनले भने भने, ‘स्वास्थ्य संकटकाल लगाउनुपर्छ। मन्त्रालयमा यस विषयमा छलफल चलिरहेको छ।’
निषेधाज्ञा तथा लकडाउन लगाएर पनि महामारी नियन्त्रण गर्न कठिन भएकाले मन्त्रालयले स्वास्थ्य संकटकालको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान लागेको हो।
‘अहिले यस्तो बेलामा पनि नलगाइएको जनस्वास्थ्यको संकटकाल अहिले हुन्छ होला? यो भन्दा खराब अवस्था के हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने।
कोरोना महामारीको झन् भयावह बन्दै गएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघ लगायत अन्य संघले पनि संकटकाल घोषणा गर्ने माग राख्दै आएका छन्।
‘मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ। केही दिनमा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पनि जान्छ। निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट नै हुन्छ,’ उनले भने।
कोरोनाको पहिलो लहरमा दैनिक रूपमा दुई देखि पाँच हजारसम्म संक्रमित बढेमा संकटकाल घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव यसअघि पनि मन्त्रालयले गरेको थियो।
संक्रमितको संख्या २ हजार र मृतकको संख्या १० पुगेपछि मन्त्रालयले संकटकालको प्रस्ताव समेत मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो।
सोमबारमात्रै कोरोना संक्रमणबाट ३७ जनाको निधन भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार संक्रमणबाट एकै दिन मृत्यु हुने संख्या हालसम्मकै उच्च हो। ७ हजार ३ सय ८८ जना संक्रमित थपिएका छन्। यो संख्या पनि हालसम्मको उच्च हो।
भाइरस फैलावट दर
अहिले कोरोनाभाइरस रक्तबीज झैं फैलिएर संक्रमितको संख्या तीन लाख ३६ हजार नाघिसकेको छ। यसबाट मृत्युवरण गर्नेको संख्या पनि ३ हजार नाघिसकेको छ।
नेपालमा संक्रमण फैलाउने दर एकदमै उच्च छ।
नेपालमा कोरोनाको अवस्था एकदमै भयावह भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम बताउँछन्।
भारतको जस्तो अवस्था आउन समय नलाग्ने डा. गौतमको भनाई छ।
‘संक्रमण दर भारतको भन्दा नेपालमा धेरै छ,’ डा. गौतमले भने, ‘मानिसहरू आफ्नो कर्तव्य निवार्ह गर्दैन। खाली सरकारको मात्रै आलोचना गर्छन्।’
भारतको ‘आर’ (एकजनाले अर्को संक्रमण सार्ने दर) १.६ छ।
नेपालको २ भन्दा बढी छ। अर्थात नेपालमा अहिले एकजना संक्रमितले २ जना भन्दा बढीलाई संक्रमण सार्नसक्छ। र त्यो संक्रमण त्यसैको दोब्बर हुँदैजान्छ। अर्थात् २ बाट ४, अनि ४बाट ८ यस्तै यस्तै।
मन्त्रालयले संक्रमण उच्च गतिमा बढेकाले अस्पतालमा राखेर हेरचाह गर्न बेड उपलब्ध गराउन नसकिने जानकारी दिइसकेको छ।
अब मन्त्रालयलको अभिव्यक्तिले प्रष्ट हुनुपर्ने छ। नेपालमा संकटकाल लगाउनुको अन्य कुनै विकल्प छैन।
कोरोना संक्रमण जसरी बढेको छ, नागरिक गम्भिर नभएको डा. गौतम बताउँछन्।
‘हामी के सोचेका थियौँ भने मानिसहरू संक्रमणदेखि डराउन संक्रमण यसरी जाँदैगरोस, कन्ट्रोल गर्दै जान्छौ भन्ने हाम्रो रणनीति थियो,’डा. गौतमले भने,‘ तर, मानिसहरूलाई कडाई नगरि नहुने रहेछ।’
‘यो रोग उपचार गरेर ठीक हुने रोग होइन। अक्सिजन, आइसियु र रेमडिसिभिर, भेन्टिलेटर भयो भने बाँचिन्छ भन्ने मानिसमा भ्रम छ। जुन कुरा धेरै गलत हो। भेन्टिलेटरमा गएका कति जना फर्किए भन्ने हिसाब राख्नुपर्छ। त्यो हिसाब डरलाग्दो छ,’ डा. गौतमले भने।
तत्काल संकटकाल घोषणा गर : चिकित्सक संघ
नेपाल चिकित्सक संघले तत्काल नै स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न सरकारलाई अपिल गरेको छ।
केही दिन अघि मात्रै विज्ञप्ति निकालेर संक्रमण नियन्त्रणको लागि संकटकाल घोषणा गर्नुपर्ने माग उसले गरेको थियो।
सरकारी सयन्त्रले मात्र नपुग्ने भएकाले देशमा भएका अन्य सयन्त्रको उपयोग गर्नको लागि संकटकाल घोषणा गर्नुपर्ने चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की बताउँछन्।
‘जनस्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएमा, महामारीको अवस्था आएमा संविधानमा नै संकटकाल लगाउन सकिने व्यवस्था छ,’ डा. कार्कीले भने, ‘माहामारी नियन्त्रण गर्न सकियोस भनेर नै संकटकाल लगाउने हो।’
‘सरकारी अस्पतालका बेड, जनशक्तिले पुग्दैन। संकटकाल घोषणा गर्न सकेमा हाल भएका निजि तथा अन्य संयन्त्र सरकारले उपयोग गर्न सकेमा केही राहत मिल्छ,’ डा. कार्कीले भने।
के हो ‘स्वास्थ्य संकटकाल?’
संक्रमण रोग ऐन २०३०, संक्रामक रोग ऐन २०२०, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, विपत जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ र आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ अनुसार ‘स्वास्थ्य संकटकाल’ लगाइन्छ। यी ऐनका आधारमा सरकारले स्वास्थ्यमा आपत्कालीन सेवा घोषणा गर्ने हो।
स्वास्थ्य संकटकाल भएमा धेरैजसो सिस्टम स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै चलाउने गर्छ।
‘जिल्ला तथा स्थानीय तहमा ककसलाई लागि अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने तथा स्रोत–साधन पनि बाँडफाड मन्त्रालय नै हुने’ सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले बताए।
संकटकालका विषयमा सरकारबाट कस्तो आदेश जारी हुन्छ त्यसमा भर पर्ने उनी बताउँछन्।
‘राज्यको सम्पुर्ण ध्यान केन्द्रित भएर महामारीमै नै लाग्नुपर्छ। सरकारले संकटकाल घोषणा गर्दा के—के प्रयोग गर्ने भन्ने आदेशमा उल्लेख गर्न सक्छ,’ डा. अधिकारीले भने, ‘ निर्णयमा जुन सर्त राखिएको हुन्छ। त्यही अनुसार नै काम होला।’
सकंटकालको बेलामा सरकारले निजी सबै संयन्त्रको प्रयोग गर्न सक्छ।
विज्ञहरू के भन्छन्?
‘अहिले जसरी कसले के गर्ने अनि कसले भनेको कसले मान्ने भन्नेजस्तो स्थिति छ। अर्कोतिर भाइरसको महामारी भयावह हुँदैछ’ भाइरोलोजिष्ट डा. वासुदेव पाण्डे भन्छन् ‘संकटकाल वा आपतकाल त्यसैका लागि चाहिन्छ। काम गर्ने ‘कमाण्डिङ’ सिस्टम हुन्छ।’
उनका अनुसार नेपालमा दैनिक २ सय प्रतिशतले केसहरू बढिरहेका छन्। संसारभरि संक्रमण दर उच्च भएका १० देशभित्र नेपाल पनि पर्छ।
‘तर, देशको सिस्टम भने एकीकृत छैन। दशथरि संयन्त्रले दश थरि तरिकाले काम गरिरहेको छ अनि कसरी सबै शक्त्ति केन्द्रित हुन्छ?’ उनले भने ‘खासगरी कन्ट्रोल मेकानिज्म नै भएन। त्यसैले आपतकाल लगाउनुपर्छ।’
त्यसो भएमा निजी वा सामुदायिक भन्ने हुँदैन। सरकारले आवश्यक पर्‌यो भने निजी स्वास्थ्य संस्था पनि चलाउन पाउँछ।
‘अहिले अस्पतालहरूमा बेड छैन भन्छन्। अक्सिजन छैन भन्छन्। निजीको मनपरी चल्नसक्छ। जनता हारगुहार गरिरहेका छन्’ उनले भने ‘तर स्वास्थ्य संकटकाल लगाइयो भने कुनै निजी अस्पतालका डाक्टर त्यो सबै राज्यले चलाउन पाउँछ। संरचनाहरू प्रयोग गर्नसक्छ। भयावह केही रोकथाम गर्न सकिन्छ।’
टेकु अस्पतालका डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार यो समय भनेको महामारीलाई पहिलो प्राथमिकता र अरु समस्यालाई गौण राख्ने बेला हो।
‘यो पनि एकप्रकारको युद्ध नै हो। अहिले हामी सबैले यही लडाईंमामात्रै ध्यान केन्द्रित गर्‌यौं भने धेरै मानिसको ज्यान जोगाउन सकिन्छ’ उनी भन्छन् ‘तर यस्तै हो भनेर वेवास्ता गरियो भने त झन ठूलो क्षति हुनसक्छ।’
पुनले यस्तो समयमा सारा राज्य संयन्त्रको ‘अर्जुनदृष्टि’ नै महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनुपर्ने पनि बताए।
‘यो समय हाम्रो लागि लडाईंको समय हो। हामीले आँखाले देख्न सकेका छैनौं। तर, भाइरसले अस्पतालमा भर्ना गराउने अवस्था सिर्जना गरेको छ। ठाउँ नपाएर मानिसको मृत्यु भइरहेको छ’ उनले भने ‘अहिले सुरुवात नेपालगञ्जबाट देखिइसकेको छ। त्यस्तो अवस्थाको संकेत त देखिसकेको छ। काठमाडौंमा त्यही अवस्थाको कल्पना गरौं त स्थिति के होला?’
दिनदिनै बढिरहेका संक्रमित र लासको संख्या त्यसैको संकेत हो।